Linktree | Entprima Mozika sy bebe kokoa
Entprima - Mozika & Bebe kokoa
Entprima Live - Entprima Jazz Cosmonauts
Famoahana farany - Lahatsoratra farany
Manana nofy ve ny milina manan-tsaina? Raha izany dia azo inoana fa manonofinofy momba ny fihetseham-pon'ny mpamorona azy izy ireo. Ny firaisana sy ny fitiavana ary ny fialamboly. Hanangana vinavina izy ireo handihizan'izy ireo zazavavy, ary hifalifaly tsy misy farany. Ny famoronana ny mozika ho an'izay kely indrindra amin'ny ...
Ny tantara dia entanin'ny angano grika, izay misy ny tantsambo voataona ho faty amin'ny alalàn'ny feon-kiran'ny siren. Ampahany amin'ny holistic Entprima foto-kevitra mozika. ...
Ny "Field of Love" dia mampiasa tsy tapaka ny endrika recitative sy aria. Ao amin'ireo andalan-teny roa, ny fitantaran'i Johann Sebastian Bach avy amin'ny St Matthew Passion dia voatonona ao amin'ireo fizarana miaraka aminy. Ara-panahy amin'ny fomba iray ilay hira satria ny fanantenana ho an'ny ...
Ny fifanolanana misy eo amin'ny tanora sy ny antitra dia antsoina koa hoe fifandimbiasan'ny razana. Fa maninona no misy izy ireo? Andao hojerentsika izany. Voalohany, andao hotadidintsika ireo dingana samihafa amin'ny fiainana. Fahazazana sy taom-pianarana fidirana amin'ny fiainana miasa Fananganana kariera sy / na Fitarihana ny fianakaviana ...
Eny, meloka aho! Hatramin'ny nanombohako ny asa faharoa, tara tamin'ny naha-mpitendry mozika ahy tamin'ny taona 2019, nitady karazana marina aho izay mamaritra ny mozikako sy ireo mpitendry mozika izay manaraka fomba fanao kanto toa ahy. Andro vitsy lasa izay dia sendra ilay teny ...
Tsy fomba ny mozika elektronika!
Mampalahelo fa ny "mozika elektronika" dia nanjary niorina tamin'ny mozika pop ho karazana famaritana fomba. Tsy hoe diso amin'ny fotony fotsiny izany, fa manodikodina ny fomba fijery ny rehetra ho an'ny tanora mpihaino. Mety mahasoa eto ny fitsidihana an'i Wikipedia: Electronic Music. Ny ...
Tolotra mifantoka amin'ny mozika
Lisitry ny Holistic
Lamaody sy tononkalo
Fivarotana esperlt (Vokatra-vokatra & Accessoires)
Tranonkala Horst Grabosch (Tononkalo - Alemà ihany)